အားပျော့နေတဲ့လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(update) | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
September 25, 2009 — mmweather
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်က လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(96W) ဟာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Luzon ကျွန်းနဲ့ နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နာရီအတွင်းမှာ အင်အားလျော့ကျသွားပြီး ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖိလစ်ပိုင် မိုးလေဝသဌာနရဲ့ update 006 မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်.
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းရဲ့ အရွယ်အစားဟာ အချင်း ၂၁၅ နော်တီကယ်မိုင် (ကီလိုမီတာ ၄ဝဝ) ရှိကြောင်း၊ Quezon-Aurora Area မြောက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနေကြောင်း၊ ဒီအတိုင်းဆက်ပြီး တည်ရှိရွေ့လျားနေဦးမယ်ဆိုရင် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်နဲ့ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲ ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း အောက်ပုံမှာ ခန့်မှန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကိုဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ် –
Location of Center: 14.5 N Lat – 127.4 E Lon
Posted in Education, Weather News.2Comments »
2 Responses to “အားပျော့နေတဲ့လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(update)”
Group post reply about ONDOY(SEVENTEEN)
Soe Htaik Sep 25, 8:53 am
ကျနော်တို့မြို့ကိုတော့ ဖြတ်သွားမယ့်ပုံဘဲဗျ။ လောလောဆယ်တော့ ဒီမှာရာသီဥတုက
အဲဒီဒေသတွေကိုတော့ လောလောဆယ် Signal အဆင့် ၁ သတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဗျ။ နောက်ထပ် ၁ နာရီလောက်ဆိုရင်တော့ PAGASA က update လုပ်အုံးမယ်။
Win Naing Sep 25, 9:01 am
Weather Underground (WUND) ကလဲ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (Tropical Depression – Seventeen) လို့ JTWC သတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း တက်လာပြီ၊
လောလောဆယ်အားလျော့နေပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲအထိ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း အနေနဲ့ ဆက်သွားဦးမယ်ဆိုတာတော့ သေချာနေပြီ။
ဒါပေမဲ့ အရင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းနဲ့ မုန်တိုင်း KOPPU တို့တုန်းကလို အပေါ်ဘက်ကိုမရောက်ပဲ လမ်းကြောင်းက အောက်ဘက်(တောင်ဘက်) ကိုကျလာတာတော့ နဲနဲ စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းသဗျ။
ဒီအတိုင်းဆို တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာသာ အားပြန်ကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာမယ်ဆိုရင် ဗီယက်နမ်တောင်ပိုင်းကတော့
ကျနော်တို့ဘက်ကိုတော့ နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ မိုးများလာနိုင်တာပေါ့။
Subscribe to mmweather groups : http://mmweather.com/scribe-group.html
T2K ရဲ့ Update 007 ထွက်လာပါပြီ
Time/Date: 12:00 PM PST Fri September 25 2009
Location of Mid-Level Center: 14.3N Lat 127.3E Lon
Distance 1: 335 km (182 nm) ENE of Virac, Catanduanes
Distance 2: 380 km (205 nm) ENE of Gota Beach, Caramoan
Distance 3: 385 km (208 nm) ENE of Sorsogon City
Distance 4: 410 km (220 nm) ENE of Legazpi City
Distance 5: 450 km (245 nm) ENE of Metro Naga/CWC
Distance 6: 475 km (255 nm) East of Daet, Cam Norte
Distance 7: 605 km (327 nm) ESE of Infanta, Quezon
Distance 8: 670 km (362 nm) East of Metro Manila
MaxWinds (1-min avg): 45 kph (25 kts) near the center လေတိုက်နှုန်း ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး
Central Pressure: 998 millibars (hPa) – ဖိအားလဲ ၁ဝဝ၂ မှ ၉၉၈ အထိ ထပ်ကျသွားပါတယ်
Recent Movement: West @ 13 kph (07 kts) ရွေ့လျားရာလမ်းကြောင်း အနောက်ဘက်သို့ပြောင်းသွားပြီး အနည်းငယ် နှေးသွားတာတွေ့ရပါတယ်
General Direction: Northern Quezon-Southern Aurora Area
Size (in Diameter): 500 km (270 nm) / Average – ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ ပိုကြီးလာပါတယ်
Max Sea Wave Height (near center): 10 ft (3.0 m) လှိုင်းအမြင့် ၁ ပေ တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်
T2K TrackMap (for Public): 12 PM PST Fri Sep 25
JTWC Ship Avoidance TrackMap: 00Z Fri Sep 25
« လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ONDOY(96W) update
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 17W (ONDOY) 5days forecast »